Vivo IQOO Neo 855: Tilmaamaha, Qiimaha iyo Siidaynta | Androidsis
Xanta isaga ku saabsan ayaa bilaabatay todobaadyo ka hor suurtagalnimada soo bandhigida IQOO Neo cusub. Nooca Shiinaha ayaa la soo bandhigay moodelkan koowaad si rasmi ah afar bilood ka hor. Telefoon cusub oo ka mid ah noocyadan cusub ee ay abuureen horaantii sanadkan. Ugu dambayntii waxaan dhahnay taleefan cusub, kaas oo ah nooc cusbooneysiiyay taleefanka la sheegay. Vivo IQOO Neo 855 horay ayaa loo soo bandhigay.
Vivo IQOO Neo 855-kan waxaa loo soo bandhigay qaab wax laga beddelay, kaas oo la yimaada processor cusub iyo horumarin kala duwan. Marka way ka awood badan tahay qaabkii asalka ahaa ee yimid bilo kahor. Nooc cusub oo loogu talagalay inuu ku guuleysto suuqa kiiskan.
Sida aan aragno, isbedelka ugu weyni waa gudaha. Sida nashqadda taleefanka nagama tegin isbeddelada, si aan u aragno naqshad isku mid ah taleefoonka oo si rasmi ah loo soo bandhigay bartamihii sanadka. Naqshad ka shaqeyneysa sumaddan IQOO.
IQOO Pro iyo iQOO Pro 5G ayaa la bilaabay: ogow dhamaan astaamahooda, qeexitaanadooda iyo qiimahooda
1 Tilmaamaha Vivo IQOO Neo 855
Tilmaamaha Vivo IQOO Neo 855
Astaantu waxay raadisay inay nooga tagto taleefan awood badan kiiskan. Sidaa darteed, tan Vivo IQOO Neo 855 isticmaal processor-ka ugu awooda badan suuqa maanta, waxqabad wanaagsan. Fursadaha RAM iyo keydinta ayaa sidoo kale la ballaariyay kiiskan, marka lagu daro inay leeyihiin shaqooyin qaar hawlgalka ugu wanaagsan ee qalabka. Sidan oo kale, waxay ku yimaaddaan qalab hagaajinaya awoodda tusaalaha la soo bandhigay nus sano ka hor. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Screen: Cabbirka 6,38-inch Super AMOLED oo leh FullHD + qaraar
Cámara trasera: 12 + 8 + 2 Xildhibaan
Kaameerada hore: 16 Xildhibaan leh fur f / 2.0
Batariga: 4.500 Mah oo leh 33 W Flash Charge
Xuduudaha kala duwan: GPS, Bluetooth, WiFi 802.11 a / c, USB, GLONASS
kuwa kale: Dareenka faraha ee shaashadda, aqoonsiga wajiga
Nidaamka hawlgalka: Android Pie oo leh Funtouch 9 OS oo ah lakab habeyn ah
Cabbirada: 159.53 × 75.23 × 8.13 mm
Peso: 198,5 garaam
Processor A waa isbedelka ugu weyn ee arrintan la xiriira. Faahfaahinta ku saabsan taleefan cusub oo sumadda ka mid ah ayaa la shaaciyay toddobaadyo ka hor oo leh Snapdragon 855 oo ah processor. Marka qaabkani ugu dambayntii wuu rumoobay, kaas oo ah kan Vivo IQOO Neo 855. Waa processor-awood badan oo u oggolaanaya waxqabad wanaagsan. Intaa waxaa dheer, astaanta, oo loogu talagalay ciyaaraha, waxay nooga tagaysaa laba shaqooyin muhiim ah kiiskan. Tan iyo markii tiknoolajiyada Multi-Turbo 2.0 lagu soo bandhigay taleefanka, marka lagu daro nidaam qaboojiye dareere cusub.
Batariga wuxuu hayaa isla 4.500 Mah Mah ee moodelkii hore, in kastoo aan helno lacag cusub oo degdeg ah, maaddaama xaaladdan 33W lacag degdeg ah lagu taageerayo, taas oo ah mid xoog badan oo shaki la'aan noo oggolaan doonta inaan taleefanka ku soo dallacno muddo gaaban. Inta soo hartay ee qeexitaannada waxaa jira wax dhib ah oo isbeddel ah, marka laga reebo kamaraddeeda hore, oo ka socota 12 MP taleefanka kale illaa 16 Xildhibaan markan.
Vivo waxay durbaba xaqiijisay in IQOO Neo Snapdragon 855 Edition uu ku sii socon doono iibinta Shiinaha bishaan. Waxaan sugeynaa maalmo kooban maxaa yeelay gudaha Shiinaha waxaa si rasmi ah looga bilaabi doonaa 31-ka Oktoobar. Hadda ma jiraan wax xog ah oo ku saabsan bilaabitaankeeda caalamiga ah. In kasta oo la arko qaybinta caadiga ah ee astaanta, haddana waxaa laga yaabaa in ugu badnaan laga bilaabo suuqyo kale oo Aasiya ku yaal, laakiin dhab ahaan ma gaari doonto Yurub.
Taleefanka waxaa lagu furay seddex midab, kuwaas oo ah guduud, Aurora cad, iyo madow. Waxaan sidoo kale helnaa afar isku dhafan oo kala duwan oo RAM ah iyo keydinta gudaha ee taleefankan. Marka waxaan dooran karnaa dhowr nooc oo ah Vivo IQOO Neo 855. Qiimahooda Shiinaha waa:
Qaabka leh 6/64 GB waxaa lagu qiimeeyaa 1.998 yuan (qiyaastii 255 euro isbeddelka)
Nooca leh 6/128 GB waxaa lagu bilaabay qiime dhan 2.298 yuan (qiyaastii 293 euro)
Qaabka leh 8/128 GB waxaa lagu qiimeeyaa 2.498 yuan (qiyaastii 319 euro in la beddelo)
Nooca leh 8/256 GB wuxuu ku kacayaa 2.698 yuan (qiyaastii 344 in la beddelo)
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Vivo IQOO Neo 855: Nooca cusub ee taleefanka
Google Play wuxuu lahaan doonaa qayb loogu talagalay qiimeyntayada